SANN MAW: Three Mile Island (TMI) Nuclear Accident or China Syndrome
ဘယ်လုိုကနေစဖြစ်တာလဲဆုိုတော့ ဖိအားများရင်ပွင့်ရမယ့် အဆုို့ကစတင်တာပါ။ သူကဖိအားများလုို့တော့ ပွင့်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပီးရင်ပြန်ပိတ်သွားရမှာကို မပိတ်ပဲဖြစ်နေတာပါ။ ဟုတ်မပိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာဖြစ်လဲဆုိုတော့ ရေငွေ့တွေ ဆက်ထွက်နေတော့ အ အေးခံရမယ့် ရေတွေအငွေ့ပျံပီးပါသွား တဲ့အတွက် အထဲမှာ ရေနည်းလာတာပေ့ါ။ဒါနဲ့ရေအတော်များများထွက်ပီးသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ မီးတွေမှိတ်
တုတ် မှိတ်တုတ်။ အချက်ပေးသံတွေမည်နဲ့ စတင်အချက်ပေးပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက ဒီလောက်ခေတ်မမှီသေးတော့ အော်ပရေတာတွေ ကလဲ ကွန်ထရိုးခန်းကနေ ဒီအဆို့ရှင် ကြောင်နေတယ်ဆုိုတာ အဲ့တုန်းက မသိပါဘူး။ sensor တွေကလဲမရှိ သေးတာနေမှာပေ့ါ။သူတုို့သိတာ ဘာရှိလဲဆုိုတော့။ တစုံတခုတော့ မှားနေပီဆုိုတာ သိပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့သိမှာပေ့ါ အဲ့ဒါတော့..Alarm တွေ မီးတွေ က ဆက်တုိုက်အော်နေ.. အချက်ပြနေတာကိုး။ ဒါနဲ့သူတို့က ဘယ်လုိုယူဆလဲ ဆုိုတော့ကာ ပေါင်းဖိုထဲမှာ ရေအေးတွေ အရမ်းများနေတယ်ထင်လုိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အရေးပေါ်အအေးပေးတဲ့စက် ကို ပိတ်ချလိုက်တယ်တဲ့။ ဆုိုတော့ကာ အအေးပေးတဲ့ရေ နည်းနေတဲ့အချိန်မှာ အအေးပေးစက်ကိုပိတ်ချလိုက်တော့ အဲ့ ဒီ အေးအောင်ထည့်ပေး နေရမယ့်ရေကိုမထည့်တော့ ရေ ပိုနည်းသွားတာပေ့ါဗျာ။ ပိုဆုိုးသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီအရေးအခင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အချက်ပေါ့။ လုံးဝလုပ်သင့်တာနဲ့ပြောင်းပြန်လုပ်ချလုိုက် ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အော်ပရေတာတွေ ဟာရက်တော်တော်များများ ကြာအောင်ပဲ ဒီ meltdownဖြစ်တဲ့ဟာကို နည်းနုိုင်သမျှနည်းအောင် ကြိုးစားလုပ်ကို်င် ရပါတော့တယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီစက်ရုံကိုပိတ် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဟာတွေဖယ်ရှား ဘာညာလုပ်ကိုင်ရတာ ၁၂နှစ် အချိန်ကြာပီး အဲ့တုန်းက ဒေါ်လာ ၉ ၇၃ သန်း ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းသွားတဲ့အချက်တချက်ကတော့ ရေဒီရေးရှင်း နည်းနည်းလေးပဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပီးတော့ နောက်ပုိုင်းလေ့လာချက်တွေအရဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ကျန်းမာရေး နဲ့ပါတ်သက်ပီး ဆုိုးဆုိုးဝါးဝါးထိခိုက်တာ တွေမရှိခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်တာတွေ တုိုးမလာဘူး။ မြုံသွားတယ်ဘာညာဆုိုတာလဲမတွေ့ခဲ့ရဘူးတခြားရေဒီရေးရှင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေလဲသိသိ သာသာတက်မလာခဲ့ပါဘူးတဲ့။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒီစက်ရုံကိုပြန်လည်ပါတ်ပေ မယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပီးမှ လုို့ပြောပါတယ်။ အရည်ပျော်သွားတဲ့ပေါင်းဖုိုကုိုတော့ ဒီအတုိုင်းထားပီး နောက်ထပ်အသစ်တည်တယ်ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအရေးအခင်းဖြစ်တော့ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ. ကလေးတွေကို ချက်ချင်းဖယ်ရှား ပါတယ်။ နောက်ပုိုင်းမှာ တော့ ဖယ်ရှားတဲ့လူပေါင်း ၇၅၀၀၀ ထိရောက်သွားတယ်ပြောတယ်။ သူကပြောတာတော့ အန္တရာယ်တော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့သဘောဆုိုပီးပြောပါတယ်။
လူတွေကို အတင်းပြောင်းခုိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်သဘော နဲ့ ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ခုိုင်းတယ်လုို့ပြောတာပဲ။ တချို့လဲ ဆက်နေတယ်။ တချို့လဲသွားတယ်ပေါ့။ ဘယ်သူကမှတော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဘာကအမှန် ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုိုတာ သေချာမသိပါဘူးတဲ့။ ခုတုိုကျိုမှာဖြစ်သလုိုနေမှာပေ့ါဗျာ။ထင်တာပဲ။ဟုတ်လားတော့မသိဘူး။
ဖြစ်ပီး ၅ ရက်မြောက်မှာတော့ အမေရိကန်သမတ ဂျင်မီကာတာ လာကြည့်ပါတယ်။ လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ နုိုင်ငံသားတွေနဲ့ နုိုင်ငံတကာကို အခြေအနေတွေ စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်း။ နုိုင်နုိုင်နင်းနင်း ကုိုင်တွယ်နုိုင် နေကြောင်းပြချင်လုို့လာတာ လုို့သိရပါတယ်။ ဘာလုို့လဲဆုို အဲ့ဒီအချိန်မှာ တော်တော်များများကလန့် နေကြပါပီ။ မလန့်တဲ့ လူတွေလဲရှိသေးတာပေ့ါလေ။ ဒါပေမယ့် သူအဲ့လိုလာလည်ပီးမှ ခုန မလန့်တဲ့ လူတွေတောင် လန့်ကုန်တယ်ပြောတယ်ဗျ. မလန့်ပဲ နေမလား။ သူက ဘယ်လိုလာသလဲ ဆုိုတော့၊ အကာအကွယ်တွေ. အဖုံးအအုပ်တွေ နဲ့သေသေချာချာကာကွယ်ပီးမှစက်ရုံထဲဝင်တယ်ဆုိုပဲ။ အဲ့တော့ ဒါကို တီဗွီမှာ မြင်လုိုင်ရတဲ့ လူတွေကစဉ်းစားပီပေါ့ဗျာ။
ဘယ်လုိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါကြောင့်လူတွေ မသေခဲ့ဘူးဆုိုပေမယ့် အမေရိကန်သမိုင်းမှာ တော့ တော်တော်များများမေ့မရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါ။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ ညူပေါင်းဖုိုတည်ဆောက်မှု့တွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပီးတုန့်ဆုိုင်းသွားပါတယ်။ဆောက်လက်စက်ရုံတွေ. လည်ပါတ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေကိုစစ်ဆေးရေးတွေ.. ညွှန်ကြားချက်အသစ်တွေ၊ပေါ်လစီအသစ်တွေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ပါတော့တယ်။ ပိုကောင်းသွားတာပေ့ါဗျာ။ မဟုတ်ရင် ဒီလုိုမဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီထက်ပိုဆုိုးတာ တွေဖြစ်လာနုိုင်ပါတယ်။ အပ်နဲ့ ထွင်းရမှာကို ပုဆိန် နဲ့ ပေါက်ရကိန်း တွေပေါ်လာနုိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ အဲ့ဒီနောက်ပို်င်းမှာ ညူကနေ စွမ်းအင်ထုတ်တဲ့ စီမံကိန်းတော်တော်များရပ်ဆုိုင်းလိုက်ပီး။ တခြားဘက်တွေကို ပဲ ဦးစားပေးတော့ တယ်ကြားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေနံဈေးတွေ.. ကျောက်မီးသွေးဈေးတွေ တက်လာတာ။ အသုံးများလာတာနေမယ်။ အဲ့ဒါတွေ သုံးတော့လဲ ဘာပြသနာတက်လဲဆုိုတော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာ မှု့ဆုိုတာကြီးက အချိန်နဲ့ အမျှပြသနာတက်လာနေပါတော့တယ်။ဆုိုတောုို့ယ်တုို့ဘယ်လုိုနေကြရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါသလဲ။ ထင်မြင်ချက်လေးတွေရေးခဲ့ကြပါဦးဗျ။
crystal 19 March 2011 at 14:17